फुस्केको इँजार - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
फुस्केको इँजार | Saturdayकलम | Kavyalaya
Background Image Source: Painting by Salvador Dali
by मदनदेव भट्टराई July 6, 2019
जाडोको मौसम भएकाले दुई मित्र विनोद र चीलबहादुर एक दिन कौसीको पर्खालमा बसेर रापिलो घाम ताप्दै आधुनिक समाज र नारी मनोविज्ञानको बारेमा गफ गरिदहेको थिए । यत्तिकैमा उनीहरुको आँखा पल्ला घरकी युवतीका आँखासित जोडिन पुगे । हृष्टपुष्ट शरिरमा चोलो नलगाएको र टिनिक्क परेको चुच्चे छातीलाई धोतीको सप्कोले छोप्तै एक हातमा करुवा र अर्को हातमा साबुन र पुस्तक लिएर बढिरहेकी थिइन् । उनको मुखमा श्रृङ्गार बिग्रेको थियो । कपाल खजमजिएको थियो, ओठमा हाँसो थियो तर मुख उदास देखिन्थ्यो । धारा पुग्ने बित्तिकै ठूलो स्वरले भाँडा माझ्न लागेको रामेलाई झपार्दै, “छाड मोरा, मलाई अबेर भइसक्यो एकै छिन पर जा” भन्दै रामेसँग ढेस्सिदै करुवामा पानी भरिन् । अनि करुवालाई डीलमा राखेर मुख धुन लागिन् । मुख धोएर रुमालले पुछ्दै उठेर एक हातमा करुवामा पानी र अर्को हातमा पुस्तक लिदै पल्लो घरतिर एकपटक पिर्लिक्क आँखा लगाउँदै टिमटिम परेर मस्किँदै चोकमा आइन् ।
करुवालाई आँखी झ्यालमा राखेर त्यहीनिर रहेको गलैँचामा घोप्टो परेर घाम ताप्दै कुशवाह कान्तको उपन्यास “पतिता” पढ्न लागिन् । उपन्यास पढ्दापढ्दै एकाएक खित्का छोडेर हाँस्दै यसो टाउको उठाएर हेरिन् । त्यस बेला उनको आँखा आफुतिर आउन लागेको एउटा तीन-चार वर्षको बालक माथि पर्यो । अनि उत्तानो परेर एकैछिन त्यस बालकको मुख हेर्न लागिन् । अनि अकास्मत् उठेर चीलले चल्लाई झम्टे झैँ, बाजले परेवालाई गाँजे झैँ एकैपल्टमा ट्याप्प समातेर छाती माथि राखेर दुबै हातले बच्चालाई जोडसित च्याप्प च्यापिन् । अनि आफ्नो गालालाई उसको गालासित जोडिन् । फेरि बच्चोको दुबै गालामा च्वाप्प च्वाप्प म्वाइँ खाइन् र “मेरो बाबा राजा, मेरो प्राण” भन्दै भुक्क भुक्क उठेको बालकको दाहिने गालामा जोडसित दाँतले टोकिन् । बालक अत्तालिदै रुदैँ उनको पञ्जाबाट उम्केर भाग्यो जसरी एउटा मुसो बिरालोको पञ्जाबाट उम्केर भाग्छ ।
त्यसैबेला ९-१० वर्षकी एउटी बालिका आएर “ए ना, त्यो हाम्रो गोठमा आएर धाईकहाँ बस्ने त्यो नयाँ स्वस्नीमान्छे को हँ ? कत्ति राम्री रहिछ, को हँ त्यो ?” भन्दै सोधी । युवतीले हाँस्दै भनिन, “ए त्यो हिजो आएको स्वास्नीमान्छे ? त्यो त धाईको भाइसित पोइल आएकी रे” ।
अबोध बालिककाले फेरि सोधी-
“त्यस्ती राम्री स्वास्नीमान्छे त्यस्तो नराम्रो धाईको भाइसित किन आएकी होली ? फेरि त्यस्तो फोहोर गोठमा किन बसेको छ्या । ए ना, त्यसको आमा बाबु, दाजु भाइ कोहि छैनन् ? किन एक्लै आएकी ?”
युवतीले झर्कदै भनिन्- “अँ त नि, पोइल जाँदा पनि सबैले लिएर जान्छन् क्यारे ।”
बालिकाले अचम्म मान्दै फेरि प्रश्न गरि-“हरे शिव, सबैजनालाई छाडेर एक्लै पोइल आएकी, कस्ती मोरी ! आफ्ना आमा-बाबु, दिदी-बहिनी कसैको पनि माया नलागेको हरे राम ! ए ना, वीर बहादुरको छोरी पनि पोइल गई रे । लालबहादुरकी बहिनी पनि पोइल गई रे ।”
“लालबहादुरकी बहिनी पनि पोइल गई ! किन हँ स्वास्नीमान्छेहरू पोइल गएको, नगए पनि त हुन्छ नि ?”
अबोध बालिकाको सोझो प्रश्नले युवतीलाई अफ्ठेरो पारिदियो- “ कुन्नि कुन्नि, मलाई पनि थाहा छैन तँ केटाकेटीलाई यस्तो कुराको केको चासो ? आफै थाहा पाउनेछस् पछि।,” यति भनी बीच चोकमा सुकुल बिछ्याएर भागवतको पुस्तक हेरिरहेका महानुभावतिर युवतीले घृणापूर्ण दृष्टिले हेरिन् ।
कपाल सेतै फुलिसकेका, शारीरिक बनोटको ढङ्गबाट हेर्दा लम्बाइ भन्दा बढ्दा चौडाइ भएको उनको ठूलो गोल्फु जत्रो भुडीँको बयान गरेर साध्य नै छैन । भुडीँको गरूङ्हगोपनाको भार थाम्न नसकेर होला उत्तानो परेर भागवतको पुस्तक हेरिरहेका थिए । यसो हेर्दा उनी कुनै अखाडाबाट कुश्ती खेलेर भर्खरै थाकेर आएका हुन् कि जस्तो देखिन्थ्यो । यसै बेला एकजना ठाँटिएका अपटुडेट युवक त्यहाँ आइपुगे । आगन्तुकले दुबैलाई नमस्कार गरे । युवतीले उनले गरेको नमस्कारलाई बडो कलापूर्ण ढङ्गले एक हातले धोतीको सप्कोले छातीलाई छोपेर शर्मिलो नजर लगाउँदै कठिनतापूर्वक नमस्कारको उत्तर दिइन् । कहिले कौसीका ठिटाहरू तर्फ र कहिले आफ्नो शरिरलाई हेर्दै आगन्तुकसित कुरा गर्न लागिन् । उनको कुरा गराइमा तीखोपना थियो, हँसाइमा लज्जा भन्दा बढ्ता अट्टहास थियो । एउटा हात छाती माथि नै थियो, अर्को हात चाहिँ कहिले गालामा पुग्दथ्यो कहिले सिउँदो चिरेको कपालको बीच भागमा पुग्दथ्यो । गाला राता भइरहेका थिए । निधारमा थाहा नपाइने किसिमले चिट-चिट पसिना आइरहेका थिए ।
आगन्तुकले उनको कुरामा ध्यान नदिएर भुँडे महानुभावसित कुरा गर्न लागे । आफ्नो कुराको जवाफ नपाएर पछि युवतीले विस्तारै धोतीको फुर्को मुखमा हालेर टोक्न लागिन् । अनि कपाल फुकाइन् जोडसित टाउकोको पछिल्लो भागमा कन्याइन् अनि त्यहीनिर नजिकै खेल्न लागेकी बालिकालाई झम्टदै “ए तँलाई पढ्न पर्दैन । जुन बेला पनि खेलेरै बस्ने, अझ पढ्न जान्नस” भन्दै लछार-पछार पार्दै भुत्ल्याईन् । बालिका कङ्कला शब्द गर्दै रुँदै भित्र गई ।
अनि घाममा सुतिरहेको कुकुरलाई “आ पापी आ” भन्दै बोलाएर त्यसलाई काखमा सुताएर कुकुरको मसिनो चिप्लो रेशम जस्ता रौंमा हात फेर्न थालिन् । एकै छिनमा नजाने के बिचारले हो सुतिरहेको कुकुरलाई एक्कासि उठाएर “खडे गर पापी, खडे गर” भन्दै खडा गराइन् । कुकुर मुखबाट लामो-लामो जिब्रो बाहिर झिक्दै सास लिंदै अघिल्लो दुई खुट्टा थर-थर कमाउँदै खडे गरेको, युवतीले ध्यानपूर्वक हेरिरहेकी थिइन् । त्यसै बीच बाहिर कुकुर भुकेको सुनेर पापी पनि दौड्दै आवाज आएको दिशातिर भुक्तै गयो । आगन्तुकसित कुरा गरि ति भुँडे महानुभाव पनि उनीसितै बाहिर गए ।
युवती चाहि आँखे झ्यालतिर गएर ध्यानमग्न भएर पल्लो घरको कौसितिर हेर्दै दाहिने खुट्टाको बुढि औंलाले भूइँ मन्तिरको माटो कोप्रन लागिन् । अनि पिच्च थुक्दै छातीको अर्धभाग देखाउँदै करुवा उचालेर टुटीबाट पानी त्वाररर गर्दै नजिकैको खाडल परेको जमिनमा फालिन । अनि फेरी धारामा गएर करुवामा पानि भरिन् । पानी भरेको करुवालाई पेटीमा राखेर धाराको टुटीमा मुख लगाएर कल-कल गर्दै पानी पिइन् । फेरी मुखभरि पानी लिदै पिच्च पिच्च गर्दै निक्कै टाढासम्म पुग्ने गरी फालिन् । कर्के नजरले फेरि एकपटक कौसीतिर हेर्दै माथिल्लो दाँतले तल्लो ओठलाई टोक्दै घर भित्र पसिन् ।
युवती भित्र गएको केही बेर पछि रेडियोबाट आधुनिक फिल्मी गीत घन्किन थाल्यो । अलि बेर पछि श्रिङ्गार-पटार पारेर, कपाल-सपाल कोरेर लुगाको पोको लिएर चोकमा आएर धोतीको सानो फुर्कोले छाती छोप्दै चुच्चेदार चेष्टर लगाइन् । अनि बडो जतनसाथ टाउकोबाट छिराएर पेटिकोट लगाइन् । पेटिकोट र चेष्टर मात्र लगाएर ठिङ्ग उभिएर चारैतिर हेरिन् । यसै बीच रामे आइपुग्यो । युवतीले रामलाई क्रोधपुर्वक हेर्दै भनिन्- “मोरो, स्वास्नीमान्छेले लुगा लगाएको बेलामा आउनु हुन्छ ? नकच्चरो। भित्र जाडो भयो भनेर बाहिर आएर लुगा लगाउन लागेको- के भन्नु यो घरको मानिसको त सोमत नै छैन । भैगो, ल यो धोती चुन्याइदे ।”
यति भनी उसको हातमा धोती राखिदिइन् । अनि आफु बुलाउज लगाउन लागिन् । रामले धोती चुन्याउँदै भन्यो- “अस्ति सुचीकारले ल्याएको फलाटिनको चोलो लगाए भैहाल्यो नि ! यो जाडोमा किन यस्तो ठुटे चोलो लगाएको हजुरले ?”
“मोरो बढ्ता न हो । तैले मात्र जानेको छस् ? तँ स्वास्नीमान्छे भएको भए थाहा पाउने थिइस् ।” यति भनी युवतीले उसको हातबाट धोती खोसेर लगाउँदै भनिन्- “अस्ति नै मैले यो चोलो र धोती लगाएको तँलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो भनेको होइन ?”
रामे खिस्स हास्यो ।
युवतीले रामेलाई केही पैसा दिंदै भनिन्- “जा अमिलो सुन्तला किनेर ले, मलाई आज पिरो अमिलो खान मन लाग्यो ।” रामेलाई सुन्तला किन्न पठाइ युवतीले कता-कता मन नलागेको जस्तो गरी एकपटक कौसीतिर हेर्दै धारामा गइन् र धाराको टुटी भित्र मुख हालेर पानी पिउन खोजिन् । तर त्यस बेला धारामा पानी आउन बन्द भइसकेको थियो । पानी नआएको देखेर धारालाई धारे हात लगाउँदै फत्फताउँदै धारानिरको पर्खालमा चडेर फुलेको रातो गुलाबको फुल टिपेर कपालमा सिउरिन् । त्यस पछि चारैतिर हेरेर फरिया फरक्क फर्काएर थ्याच्च बसिन् । त्यो देखेर विनोदले जिल्ला परेर टाउको फर्कायो । उता चिलबहादुरले मुखभरी थुक लिएर “थुक्क मोरी, जा राँडि, छिल्लिएकी मोरी, कस्ती रण्डी रहिछ !” भन्दै थुक्क थुके ।
विनोदले भने-“हा, अर्कालाई किन गालि गर्नु त्यसै । बिचरीलाई पिसाब लागेको होला, रोक्न सकिन होली, के लाग्छ ! हामी पनि त बाटोमा पिसाब गर्दछौँ नि ! शरीर विज्ञानले पनि त भनेकै छ दिशा पिसाब रोक्नाले हानि हुन्छ भनेर। यसमा गालि गर्ने के कुरा भयो र ।”
यो कुरा सुनेर चिलबहादुरले भने-“होइन तपाईंलाई थाहै छैन यसको कुरा । यसको चालै यस्तै छ । जहिले पनि यस्तै गर्छे । अस्ति साझाको बसमा चढ्ने बेलामा पनि मलाइ ढेस्सा लगाउँदै भित्र पस्न खोजि । अनि मैले के गरेको यस्तो भनेको त राँडी त ‘लेडिज फष्ट’ भन्दै मलाई त लौ झन् को घचेडी दिई । मलाई झन् झन् रिस उठ्यो । अनी भनिहालें- “माफ गर्नु होला, आजलाई मामला गडबड भइहाल्यो । अर्कोपल्टदेखि ‘लेडिज फष्ट’ गरौंला ।”
उता युवती रामे आएको आवाज सुनेर हत्पताउँदै दौडेर गइ उसको हातबाट सुन्तला लिएर छोडाउन लागिन् । सुन्तला छोडाउँदा सुन्तलाको राग रामको नाकमा पर्यो । उसले नाक चेप्राउँदै-चेप्राउँदै हाक छिउँ हाक छिउँ गर्न लाग्यो । हाक छिउँ गर्दा जोड पर्न गएर होला उसको सुरुवालको इँजार चुंडेर फुस्कियो । रामले हत्पत् सुरुवाल समात्यो । उसको मुख लाजले निहुरियो । युवतीले आफ्नो हाँसो रोक्न सकिनन् । उनले हाँसोको बिचमा तुरुन्तै आफ्नो टाउकोको रिवन झिकेर इँजार हाल्न दिइन् । डराएको मुद्रामा रामे जिल्ल परेर उनको मुख हेर्न थाल्यो र भन्यो – “हजुर, माफ पाउँ, हजुरलाई केको तकलिफ, मा आफै हालिहाल्छु नि ।”
यति भनी रामले युवतीको मुखमा फेरि हेर्यो । युवतीको मुखमा अझै हाँसो थियो उनको आभास नपाएर सन्तोषको सास फेरेर भन्यो-“रिवन चिप्लो हुन्छ । फेरि फुस्कियो भने के गर्नु नि ।”
उसको कुरा सुनेर युवतीले भनिन्-“हुन त मैले पनि एकपल्ट इँजार नपाएर रिवनको इँजार हालेर जाँदा बीच बाटोमा फुस्केर कस्तो आपत, तर तिमीहरु लोग्नेमान्छेलाई त फुस्के पनि के हुन्छ र ?”
यति भनी युवती रामेतिर बढिन् । रामे डरले थर-थर काम्दै भन्न लाग्यो-“मालिक भएर के गरेको हजुरले । कसैले देख्यो भने !”
उता खल-खल पसिना आएको रातो पिरो मुख लगाउँदै युवतीले मसिनो स्वोरमा भनिन्-“भगवानको मन्दिरमा सानो ठुलो र उचनिचको भेदभाव हुँदैन । नोकर मालिकको सवाल जरजर पुरानो सामन्ती प्रथाको प्रतिक हो । मानव-मानवमा के को भेद !” रामे र उनको बीच तानातानी हुँदा-हुँदै रामको सुरुवाल….। रामे त्यहाँबाट भाग्न खोज्दा खुट्टा अल्झेर युवतीको छाती माथि पछारिन पुग्यो ।
उता दुबै मित्र खित्का छाडेर हाँस्न लागे । ठ्याक्कै त्यसै बेला भुँडे महानुभाव पनि चोकमा आइपुगे ।
मदनदेव भट्टराईका केही कथाहरू बाट साभार
मदनदेव भट्टराईका केही कथाहरू
Image Credit: अनु खड्का